Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Airbus ihambisa i-A220 jet yokuqala kwiAir France
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-A220 kuphela kwenjongo yenqwelomoya eyenzelwe i-100-150 yemarike yezihlalo kwaye idibanisa i-state-of-the-art aerodynamics, izixhobo eziphambili kunye ne-injini ye-turbofan eyenzelwe u-Pratt & Whitney.
I-A220 yeyona moya isebenzayo kwaye ibhetyebhetye kwi-100 ukuya kwi-150 yecandelo lentengiso namhlanje.
I-Air France yokuqala eyi-A220-300 iya kusebenza kwinethiwekhi yothutho oluphakathi ukusukela kwixesha lasebusika lowama-2021.
Ngoluhlu oluya kuthi ga kwi-3,450 nm (i-6,390 km), i-A220 inika iinqwelomoya ukuba zongeze ukusebenza kokuguquguquka.
I-Air France ifumene i-A220-300 yokuqala kwi-odolo yenqwelomoya ezingama-60 zohlobo, owona myalelo mkhulu we-A220 kumphathi weYurophu. Inqwelomoya yasiwa kwindibano yokugqibela yeAirbus eMirabel, eQuebec, eCanada yaza yatyhilwa ngokusesikweni eluntwini ngexesha lomsitho owawubanjelwe kwisikhululo seenqwelomoya iParis Charles-De-Gaulle.
Airbus I-A220 yeyona moya isebenzayo kwaye ibhetyebhetye kwi-100 ukuya kwi-150 yecandelo lentengiso namhlanje. Ukuvuselelwa kweenqwelo moya ze-air France zodwa kunye nezi nqwelomoya zangoku ziyakwandisa ukusebenza kakuhle kunye nokuthuthuzelwa kwabathengi kunye nenkxaso yeAir France ukufezekisa iinjongo zayo zokusingqongileyo kunye neenjongo zokuzinza.
Eyokuqala Air France I-A220-300 izakusetyenzwa kuthungelwano oluthwala phakathi ukusukela kwixesha lasebusika lowama-2021. Okwangoku, iAir France isebenza ngeenqwelomoya ezili-136 Airbus inqwelomoya. I-Air France iphinda ihlaziye iinqwelomoya zayo ezinde, kwaye sele ithathe ukuhanjiswa kwe-11 A350s ngaphandle komyalelo wama-38.
I-Air France A220-300 cabin iqulunqwe ngendlela yodidi olunye ukwamkela kakuhle abakhweli abali-148. Ukunikezela ngenduduzo enye yendlela, kunye nezihlalo zesikhumba ezibanzi, iifestile ezinkulu ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 ngaphezulu kwesithuba sokuhamba ngomkhweli ngamnye, iAir France A220 ikwanonxibelelwano olupheleleyo lweWiFi kuyo yonke ikhabhathi kunye neziseko ezimbini ze-USB kwisitulo ngasinye sabakhweli.
I-A220 kuphela kwenjongo yenqwelomoya eyenzelwe i-100-150 yemarike yezihlalo kwaye idibanisa i-state-of-the-art aerodynamics, izixhobo eziphambili kunye ne-injini ye-turbofan eyenzelwe u-Pratt & Whitney. Ngoluhlu oluya kuthi ga kwi-3,450 nm (i-6,390 km), i-A220 inika iinqwelomoya ukuba zongeze ukusebenza kokuguquguquka. I-A220 ihambisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 zokutsha kwepetroli kunye nokukhutshwa kwe-CO2 kwisihlalo ngasinye xa kuthelekiswa neenqwelo moya zangaphambili, kunye ne-50% yokukhutshwa kweNOX kunemigangatho yemizi-mveliso. Ukongeza, i-footprint yengxolo yenqwelomoya incitshisiwe ngama-50% xa kuthelekiswa neenqwelo moya zangaphambili-ezenza i-A220 ibe ngummelwane olungileyo ojikeleze izikhululo zeenqwelo moya.
Ukuphela kuka-Agasti, ngaphezulu kwe-170 A220s sele ihanjisiwe kubaqhubi abali-11 kwihlabathi liphela.